Kheyre oo gaaray Magaalada Nairobi kulamana ka bilaabay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Kheyre oo gaaray Magaalada Nairobi kulamana ka bilaabay
Kheyre oo gaaray Magaalada Nairobi kulamana ka bilaabay
Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya waxaa xalay gaaray oo lagu soo dhaweeyay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan Cali Kheyre, kaas oo ololihiisa doorashada ka bilaabay dalal kamid ah Geeska Afrika.
Kheyre oo muddo Shan Maalin ah ku sugnaa dalka Jabuuti ayaa la kulmay Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, isaga oo kala hadlay arrimo ku saabsan xaalada dalka iyo doorashooyinka.
Warraka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Xasan Cali kheyre uu durba Magaalada Nairobi ka bilaabay kulamo uu la yeelanayo xubno ka tirsan dowladda,waxaana sidoo kale la filayaa in uu la kulmo Siyaasiyiin ku sugan Magaalada Nairobi.
Magaalada Nairobi waxaa xiligan ku sugan qaar kamid ah Musharaxiin u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Jubbaland , waxaana la filayaa in sidoo kale ay halkaasi tagaan siyaasyiin kale.
Previous articleDhageyso:-Warka Subax ee Radio Risaala 09-10-2020
Next articleDhageyso:-Xaalada doorashooyinka Hir-Shabeelle & digniino laga saaray